Maamulka Gobolka Salal oo Saylac kula kulmay saraakiil ka socday dalka Jabuuti | Somaliland.Org
July 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Badhasaab ku xigeenka gobolka Salal Cali Alaalle Rayaale ayaa maanta kulan balaadhan kula yeeshay magaalads Saylac masuuliyiin iyo saraakiil ka socday dalka Jabuuti.
waxaa kulankaasi ka soo qeyb galay masuuliyiin ka kala tirsan laamaha dawladda ee labada dal sida ciidamada, wasaaradaha iyo Haayadaha sirdoonka.
Shirkan ayaa lagu falan-qeeyay sidii xidhiidhka labada dal loo sii xoojin lahaa loona fududeyn isku gudubka labada dal gaar ahaan ganacsiga iyo socotada. Badhasaab ku xigeenka gobolka galbeedka Somaliland ee Salal Cali Alaalle Rayaale ayaa shirkani ka dib saxaafada u sheegay in shirkan uu noqon doono mid joogto ah oo bishiiba laba jeer la qaban doono.
Waxaanu intaasi ku daray in kulankaan labada dhinaca uu daba socday weftigii Somaliland ee dhawaan socdaalka ku tagay dalka Jabuuti ee uu hoggaaminayay Wasiirka Maaliyada Md. Maxamed Xaashi Cilmi oo ay xubno ka ahaayeen Wasiirka Ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Md. C/Risaaq Khaliif Axmed iyo Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Md. Xasan Cabdi Cabdi Cawad.
Previous PostMuxuu soo kordhiyay socdaalkii Madaxweyne Siilaanyo ee gobolada Awdal iyo GabilayNext Post“Somaliland waxa ay Tustay Afrika in aanay u baahnayn Malaayiinka aan ku Shubno	Blog